နိုင်ငံခြား ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မှ မြန်မာနိုင်ငံ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ကူးပြောင်းခြင်းအတွက် အခွန်နှုန်းထားထုတ်ပြန်
တတိယအကြိမ်အဖြစ် တိုက်ကြေကား ၃၃ စီး ထပ်မံသိမ်းဆည်း
ဒေသ သင်္ကေတပါ ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြား အသစ်များကို ယခင်ဈေးနှုန်းအတိုင်း ကျပ်တစ်သောင်းဖြင့်ရောင်းချ
သီရိမင်္ဂလာကားဈေးကွက် အရင်ထက် အရောင်းသွက်လာဟုဆို
ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုလျှော့စေရန် မီးပွိုင့်များ၏ အချိန်ထားရှိမှု စီစစ်မည်
ဂျီအမ် ချက်ပလက်ကားများ မြန်မာပြည်တွင် ရောင်းချတော့မည်
ချက်ပလက်အရောင်းပြခန်း မန္တလေးတွင် ထပ်ဖွင့်မည်
နိုင်ငံခြား ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မှ မြန်မာနိုင်ငံ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ကူးပြောင်းခြင်းအတွက် အခွန်နှုန်းထား ထုတ်ပြန်
နိုင်ငံခြားယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မှ မြန်မာယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သို့ ကူးပြောင်းရာတွင် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ကောက်ခံမည့် အခွန်နှုန်ထားများကို က.ည.န မှထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ လိုင်စင်ပြောင်းလဲမည်ဆိုပါက ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မှတ်ပုံတင်ကြေး ငါးနှစ်စာအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀ နှင့် နှုန်းထားညီသည့် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ယာဉ်မောင်းစစ်ဆေးခအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ နှင့် ညီမျှသည့် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်လည်းကောင်း၊ လက်ဝဲမောင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြစ်လျှင် ကူးပြောင်းခြင်းအတွက် စစ်ဆေးခအဖြစ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ နှင့် ညီမျှသည့် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်လည်းကောင်း၊ သူတပါး ထိခိုက်မှု အာမခံကြေးအဖြစ် ကျပ်ငါးရာကို လည်းကောင်း၊ Smart Card အတွက် ကျပ် ၁၂၀၀ ကိုလည်းကောင်း ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ပြည်ပမှ တင်သွင်းလာသော တိုက်ကြေကားများကို အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ စီစစ်သိမ်းဆည်းခဲ့ရာတွင် ဇွန် ၂၅ ရက်က တတိယအကြိမ်အဖြစ် တိုက်ကြေကား ၃၃ စီးကို ထပ်မံသိမ်းဆည်းခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းသူများသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက် နောက်ပိုင်းတွင် ပြည်ပမှ ကိုယ်ထည်ထိခိုက်ထားသော မော်တော်ယာဉ်များတင်သွင်းလာခဲ့ပြီး ပြန်လည်ပြုပြင်ရောင်းချရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တင်သွင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းကားများကို တင်သွင်းလာသည့် ကုမ္ပဏီများကိုလည်း အရေးယူမှုများပြုလုပ်ပြီး ကားများကိုမူ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်း၍ အရည်ကျိုစက်ရုံသို့ပို့ကာ ဖျက်ဆီးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဒေသ သင်္ကေတပါ ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြား အသစ်များကို ယခင်ဈေးနှုန်းအတိုင်း ကျပ်တစ်သောင်းဖြင့် ရောင်းချ
က.ည.န အနေဖြင့် ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြားအသစ်များကို ယခင်ဈေးနှုန်းအတိုင်း ကျပ်တစ်သောင်းနှုန်းဖြင့် ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ဇူလိုင် ၃ ရက် မှစတင်ကာ မြန်မာအက္ခရာ နံပါတ်များကို အင်္ဂလိပ်အက္ခရာများဖြင့် ပြောင်းလဲအစားထိုးခဲ့ပြီး နံပါတ်ပြားများပေါ်တွင်လည်း ဒေသဆိုင်ရာ သင်္ကေတ အတိုကောက်များကို ရိုက်နှိပ်ပေးခဲ့သည်။ ထိုသို့ ပြောင်းလဲထုတ်ပေးခဲ့သော်လည်း ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိဘဲ ယခင်အတိုင်း ကျပ်တစ်သောင်းနှုန်းဖြင့်သာ ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ယခုတစ်ပတ်အတွင်းတွင် သီရိမင်္ဂလာဈေးဟောင်းယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းမှာ အရင်ထက်စာရင် နည်းနည်းလေး အရောင်းသွက်လာတယ်လို့ ကားဝယ်ရောင်းအချို့က ပြောကြားသည်။ ဒေါ်လာဈေးတက်ခြင်းကြောင့် Custom နှင့် က.ည.န မှ အခွန်များတိုးမြင့်ကောက်ခံခြင်းကြောင့် ကားဈေးသည်လည်း (၃)သိန်းမှ(၄)သိန်းအထိ မြင့်တက်သွားကြောင်း သိရှိရသည်။
ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုလျော့စေရန် မီးပွိုင့်များ၏ အချိန်ထားရှိမှု စီစစ်မည်
ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများ မကြာခဏဖြစ်ပွားနေသောကြောင့် အဆိုပါယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကို လျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် JICA အဖွဲ့နှင့် စည်ပင်မှတာဝန်ရှိသူများ မီးပွိုင့်များ၏ အချိန်ထားရှိမှုအချက်ပြစနစ်ကို ပြန်လည်စီစစ်နေကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါမီးပွိုင့် အချက်ပြစနစ်ကို ချိန်သားကိုက် တပြေးညီထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါက ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကို အချိန်တိုအတွင်း ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ ထို့ပြင် မီးပွိုင့်တစ်ခု၏ အချက်ပြစနစ်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်နှင့် စည်းကမ်းရှိဖို့လည်းလိုအပ်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ ပြောကြားသည်။
ဂျီအမ်ချက်ပလက်ကားများ မြန်မာပြည်တွင် ရောင်းချတော့မည်
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးကားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော ဂျီအမ် ကုမ္ပဏီက ၎င်းတို့၏ ချက်ပလက်ကားသစ်များကို မြန်မာပြည်တွင်းသို့ လာရောက်ရောင်းချတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ တစ်ပတ်ရစ်ကားများသာဝင်ရောက်မှုများပြားသော မြန်မာ့ကားဈေးကွက်သို့ ဂျီအမ်ကုမ္ပဏီမှ ချက်ပလက်ကားအသစ်များ ဝင်ရောက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ ထို့အပြင် ယင်းကုမ္ပဏီသည် Manufacture Warrenty နှင့် Auto Sale Service ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသွားနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံရှိ Paciffic-AA Group ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
လုပ်ငန်းသုံးကားများ ရောင်းချသော Showroom များတွင် အိမ်စီးကားများသာမဟုတ်ပဲ လုပ်ငန်းသုံးကားများပါ အရောင်းအဝယ်အေးနေကြောင်းသိရှိရသည်။ ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်သောကြောင့် ကားဈေးတက်လာပြီး ဝယ်ယူသူများမှ စောင့်ဆိုင်းနေသည့် အနေအထားတွင်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ (၁၀)ဘီး၊ (၁၂)ဘီး၊ (၂၂)ဘီး စသော လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကားကြီးများမှာ Ammount များသဖြင့် ဒေါ်လာဈေးတက်သောကြောင့် အိမ်စီးကားများထက် ဈေးပိုတက်လာကြောင်းသိရှိရသည်။ ကိုရီးယား Light Truck တစ်တန်ကားများမှာလည်း တစ်စီးလျှင် (၅)သိန်းဝန်းကျင်ခန့်တက်လာပြီး အရောင်းအဝယ်အေးလျက်ရှိသော်လည်း ဂျပန် နှင့် ကိုရီးယား Mini Bus များမှာ ပုံမှန်အတိုင်း အရောင်းအဝယ်ရှိကာ School Bus အသုံးပြုရန်အတွက် ဝယ်ယူများကြောင်းသိရှိရသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု General Motors က ထုတ်လုပ်သည့် Chevrolet မော်တော်ယာဉ်အရောင်းပြခန်းကို ရန်ကုန်မြို့အပြင် မန္တလေးမြို့တွင်ပါဖွင့်လှစ်ရန် အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း Chevrolet မော်တော်ယာဉ်များကို တစ်ဦးတည်းဖြန်ဖြူးရောင်းချခွင့်ရသည့် Pacific Alphine Pte,Ltd. ဥက္ကဌ ဦးဇော်မိုးခိုင်မှ ပြောကြားသည်။ ထိုသို့ဖွင့်လှစ်ရောင်းချရန်အတွက် စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုချက်စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် စတင်ရောင်းချရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ၎င်းက ပြောဆိုသည်။
ဒသေ သင်ျကတေပါ ဖောငျးကွှနံပါတျပွား အသဈမြားကို ယခငျဈေးနှုနျးအတိုငျး ကပျြတဈသောငျးဖွငျ့ရောငျးခြ
ယာဉျကွောပိတျဆို့မှုလြှော့စရေနျ မီးပှိုငျ့မြား၏ အခြိနျထားရှိမှု စီစဈမညျ
ခကျြပလကျအရောငျးပွခနျး မန်တလေးတှငျ ထပျဖှငျ့မညျ
နိုငျငံခွားယာဉျမောငျးလိုငျစငျမှ မွနျမာယာဉျမောငျးလိုငျစငျသို့ ကူးပွောငျးရာတှငျ မွနျမာကပျြငှဖွေငျ့ ကောကျခံမညျ့ အခှနျနှုနျထားမြားကို က.ည.န မှထုတျပွနျခဲ့သညျ။ ထိုသို့ လိုငျစငျပွောငျးလဲမညျဆိုပါက ယာဉျမောငျးလိုငျစငျမှတျပုံတငျကွေး ငါးနှဈစာအတှကျ အမရေိကနျဒျေါလာ ၅ဝ နှငျ့ နှုနျးထားညီသညျ့ မွနျမာကပျြငှဖွေငျ့လညျးကောငျး၊ ယာဉျမောငျးစဈဆေးခအတှကျ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁ဝ နှငျ့ ညီမြှသညျ့ မွနျမာကပျြငှဖွေငျ့လညျးကောငျး၊ လကျဝဲမောငျးယာဉျမောငျးလိုငျစငျဖွဈလြှငျ ကူးပွောငျးခွငျးအတှကျ စဈဆေးခအဖွဈ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁ဝ နှငျ့ ညီမြှသညျ့ မွနျမာကပျြငှဖွေငျ့လညျးကောငျး၊ သူတပါး ထိခိုကျမှု အာမခံကွေးအဖွဈ ကပျြငါးရာကို လညျးကောငျး၊ Smart Card အတှကျ ကပျြ ၁၂ဝဝ ကိုလညျးကောငျး ပေးသှငျးရမညျဖွဈကွောငျး သိရှိရသညျ။
ပွညျပမှ တငျသှငျးလာသော တိုကျကွကေားမြားကို အကောကျခှနျဦးစီးဌာနမှ စီစဈသိမျးဆညျးခဲ့ရာတှငျ ဇှနျ ၂၅ ရကျက တတိယအကွိမျအဖွဈ တိုကျကွကေား ၃၃ စီးကို ထပျမံသိမျးဆညျးခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။ မျောတျောယာဉျတငျသှငျးသူမြားသညျ ၂ဝ၁၃ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီ ၁၅ ရကျ နောကျပိုငျးတှငျ ပွညျပမှ ကိုယျထညျထိခိုကျထားသော မျောတျောယာဉျမြားတငျသှငျးလာခဲ့ပွီး ပွနျလညျပွုပွငျရောငျးခရြနျ ရညျရှယျခကျြဖွငျ့ တငျသှငျးလာခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ ယငျးကားမြားကို တငျသှငျးလာသညျ့ ကုမ်ပဏီမြားကိုလညျး အရေးယူမှုမြားပွုလုပျပွီး ကားမြားကိုမူ ပွညျသူ့ဘဏ်ဍာအဖွဈ သိမျးဆညျး၍ အရညျကြိုစကျရုံသို့ပို့ကာ ဖကျြဆီးသှားမညျဖွဈကွောငျး သိရှိရသညျ။
ဒသေ သင်ျကတေပါ ဖောငျးကွှနံပါတျပွား အသဈမြားကို ယခငျဈေးနှုနျးအတိုငျး ကပျြတဈသောငျးဖွငျ့ ရောငျးခြ
က.ည.န အနဖွေငျ့ ဖောငျးကွှနံပါတျပွားအသဈမြားကို ယခငျဈေးနှုနျးအတိုငျး ကပျြတဈသောငျးနှုနျးဖွငျ့ ရောငျးခပြေးမညျဖွဈကွောငျး သိရှိရသညျ။ ဇူလိုငျ ၃ ရကျ မှစတငျကာ မွနျမာအက်ခရာ နံပါတျမြားကို အင်ျဂလိပျအက်ခရာမြားဖွငျ့ ပွောငျးလဲအစားထိုးခဲ့ပွီး နံပါတျပွားမြားပျေါတှငျလညျး ဒသေဆိုငျရာ သင်ျကတေ အတိုကောကျမြားကို ရိုကျနှိပျပေးခဲ့သညျ။ ထိုသို့ ပွောငျးလဲထုတျပေးခဲ့သျောလညျး ဈေးနှုနျးပွောငျးလဲသှားခွငျးမရှိဘဲ ယခငျအတိုငျး ကပျြတဈသောငျးနှုနျးဖွငျ့သာ ရောငျးခပြေးမညျဖွဈကွောငျးသိရသညျ။
ယခုတဈပတျအတှငျးတှငျ သီရိမင်ျဂလာဈေးဟောငျးယာဉျရောငျးဝယျရေးစခနျးမှာ အရငျထကျစာရငျ နညျးနညျးလေး အရောငျးသှကျလာတယျလို့ ကားဝယျရောငျးအခြို့က ပွောကွားသညျ။ ဒျေါလာဈေးတကျခွငျးကွောငျ့ Custom နှငျ့ က.ည.န မှ အခှနျမြားတိုးမွငျ့ကောကျခံခွငျးကွောငျ့ ကားဈေးသညျလညျး (၃)သိနျးမှ(၄)သိနျးအထိ မွငျ့တကျသှားကွောငျး သိရှိရသညျ။
ယာဉျကွောပိတျဆို့မှုလြော့စရေနျ မီးပှိုငျ့မြား၏ အခြိနျထားရှိမှု စီစဈမညျ
ရနျကုနျမွို့တျောတှငျ ယာဉျကွောပိတျဆို့မှုမြား မကွာခဏဖွဈပှားနသေောကွောငျ့ အဆိုပါယာဉျကွောပိတျဆို့မှုကို လြှော့ခနြိုငျရနျအတှကျ JICA အဖှဲ့နှငျ့ စညျပငျမှတာဝနျရှိသူမြား မီးပှိုငျ့မြား၏ အခြိနျထားရှိမှုအခကျြပွစနဈကို ပွနျလညျစီစဈနကွေောငျး သိရှိရသညျ။ အဆိုပါမီးပှိုငျ့ အခကျြပွစနဈကို ခြိနျသားကိုကျ တပွေးညီထိနျးခြုပျဆောငျရှကျနိုငျပါက ယာဉျကွောပိတျဆို့မှုကို အခြိနျတိုအတှငျး ဖွရှေငျးနိုငျမှာဖွဈကွောငျးသိရှိရသညျ။ ထို့ပွငျ မီးပှိုငျ့တဈခု၏ အခကျြပွစနဈကို လိုကျနာဆောငျရှကျရနျနှငျ့ စညျးကမျးရှိဖို့လညျးလိုအပျကွောငျး တာဝနျရှိသူတဈဦးမှ ပွောကွားသညျ။
အမရေိကနျနိုငျငံ၏ အကွီးဆုံးကားကုမ်ပဏီတဈခုဖွဈသော ဂြီအမျ ကုမ်ပဏီက ၎င်းငျးတို့၏ ခကျြပလကျကားသဈမြားကို မွနျမာပွညျတှငျးသို့ လာရောကျရောငျးခတြော့မညျဖွဈကွောငျး သိရှိရသညျ။ တဈပတျရဈကားမြားသာဝငျရောကျမှုမြားပွားသော မွနျမာ့ကားဈေးကှကျသို့ ဂြီအမျကုမ်ပဏီမှ ခကျြပလကျကားအသဈမြား ဝငျရောကျလာမညျဖွဈကွောငျးသိရှိရသညျ။ ထို့အပွငျ ယငျးကုမ်ပဏီသညျ Manufacture Warrenty နှငျ့ Auto Sale Service ဝနျဆောငျမှုမြား ပေးသှားနိုငျရနျ မွနျမာနိုငျငံရှိ Paciffic-AA Group ကို မွနျမာနိုငျငံ၏ တဈဦးတညျးကိုယျစားလှယျအဖွဈ ပေးအပျခဲ့ကွောငျး သိရှိရသညျ။
လုပျငနျးသုံးကားမြား ရောငျးခသြော Showroom မြားတှငျ အိမျစီးကားမြားသာမဟုတျပဲ လုပျငနျးသုံးကားမြားပါ အရောငျးအဝယျအေးနကွေောငျးသိရှိရသညျ။ ဒျေါလာဈေးမွငျ့တကျသောကွောငျ့ ကားဈေးတကျလာပွီး ဝယျယူသူမြားမှ စောငျ့ဆိုငျးနသေညျ့ အနအေထားတှငျရှိကွောငျး သိရှိရသညျ။ (၁ဝ)ဘီး၊ (၁၂)ဘီး၊ (၂၂)ဘီး စသော လုပျငနျးသုံးကုနျကားကွီးမြားမှာ Ammount မြားသဖွငျ့ ဒျေါလာဈေးတကျသောကွောငျ့ အိမျစီးကားမြားထကျ ဈေးပိုတကျလာကွောငျးသိရှိရသညျ။ ကိုရီးယား Light Truck တဈတနျကားမြားမှာလညျး တဈစီးလြှငျ (၅)သိနျးဝနျးကငျြခနျ့တကျလာပွီး အရောငျးအဝယျအေးလကျြရှိသျောလညျး ဂပြနျ နှငျ့ ကိုရီးယား Mini Bus မြားမှာ ပုံမှနျအတိုငျး အရောငျးအဝယျရှိကာ School Bus အသုံးပွုရနျအတှကျ ဝယျယူမြားကွောငျးသိရှိရသညျ။
အမရေိကနျပွညျထောငျစု General Motors က ထုတျလုပျသညျ့ Chevrolet မျောတျောယာဉျအရောငျးပွခနျးကို ရနျကုနျမွို့အပွငျ မန်တလေးမွို့တှငျပါဖှငျ့လှဈရနျ အဆောကျအအုံဆောကျလုပျနပွေီဖွဈကွောငျး Chevrolet မျောတျောယာဉျမြားကို တဈဦးတညျးဖွနျဖွူးရောငျးခခြှငျ့ရသညျ့ Pacific Alphine Pte,Ltd. ဥက်ကဌ ဦးဇျောမိုးခိုငျမှ ပွောကွားသညျ။ ထိုသို့ဖှငျ့လှဈရောငျးခရြနျအတှကျ စီးပှားကူးသနျးဝနျကွီးဌာနမှ ခှငျ့ပွုခကျြစောငျ့ဆိုငျးနခွေငျးဖွဈပွီး ယခုနှဈကုနျပိုငျးတှငျ စတငျရောငျးခရြနျ စီစဉျထားကွောငျး ၎င်းငျးက ပွောဆိုသညျ။
Posted at: 12-07-2013 08:52 AM